nepal | NHEICC
यी हुन् विपन्नको उपचार हुने ५७ वटा अस्पताल (कुन रोगको उपचार कहाँ ?)
काठमाडौ, २७ जेठ । सरकारले विपन्न नागरिकका लागि उपचारमा सहयोग पुरयाउन ५७ वटा अस्पताल सुचीकृत गरेको छ । ती अस्पतालमा आठ किसिमका कडारोगको उपचार गर्दा विपन्न नागरिकले सरकारले दिने सहुलियत प्राप्त गर्न सक्छन् ।
अधिकांश उपत्यकामा रहेपनि केही अस्पताल उपत्यका बाहिरका समेत परेका छन् । ती अस्पतालहरुबाट विपन्न नागरिकले मुटु, क्यान्सर, मिर्गौला, अल्जाइमर्स, पार्किन्सस, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी तथा सिक्कल सेल एनिमियाको उपचार लिनसक्छन् ।
पछिल्लो समय सरकारले थप चार वटा कडा रोगको सूचि थपे पनि कार्यान्वनयमा आइसकेको छैन । Continue reading →
This entry was posted in News and tagged free, health, nepal, service on June 11, 2017 by nheicc.
सरकारको पूर्वघोषित निर्णय अनुसार वीर अस्पतालले निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा सुरु गरेको छ। अस्पतालमा मंगलबार २७ वर्षीया युवतीको निःशुल्क प्रत्यारोपण गरिएको हो। अस् पतालका निर्देशक डा. भूपेन्द्र बस्नेतले निःशुल्क प्रत्यारोपण कार्यक्रम अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोककी रश्मिला श्रेष्ठको प्रत्यारोपण गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार दुवै मिर्गौला फेल भएकी श्रेष्ठलाई उनकी ३१ वर्षीया दिदी लक्ष्मी श्रेष्ठले मिर्गौला दिएकी हुन्। Continue reading →
झाडापखलाले कसैलाई सतायो भने अधिकांशले सुझाउने औषधि हो, ‘जीवनजल’। देशका दुर्गम ग्रामीण भेगमा झाडापखलाको प्रकोप देखियो भने पनि अधिकांशले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ‘जीवनजल’ पनि पुर्‍याउन नसक्ने भन्दै आक्रोश पोख्छन्। Continue reading →